एक मलामीको वकपत्रः घाटबाट घरसम्म फर्कने बाटो छैन! « Media for all across the globe
एक मलामीको वकपत्रः घाटबाट घरसम्म फर्कने बाटो छैन!
मेरो मोबाइलमा के दोष छ कुन्नि ? रोमनमा ‘घर’ टाइप गर्दा जहिल्यै ‘घाट’ देखापर्छ। म घर न घाट भएर लेख्नै छाडिदिन्छु।
म प्रायः जमघटमा जान्नँ। जमघटमा अनिच्छापूर्वक आफ्नो नामथर बताउँदा कतिपयले भनिदिन्छन्, ‘तपाईंको समाचार कान्तिपुरमा पढेको छु बलरामजी।’
बलराम दाइसँग ‘के छ ?’ ‘ठीक छ’ भन्दा धेरै अगाडि जान सकिनँ। पहिले कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा काम गर्दा पनि त्यस्तै भयो। नागरिकमा केही वर्ष सँगै काम गर्दा पनि त्यस्तो स्मरणीय बसाउठी केही रहेनन् ।
उनी नागरिकको राजनीतिक ब्युरोमा प्रमुख थिए। म त्यसकै डेस्क एडिटर। उनका समाचार लामा हुन्थे। विज्ञापनका कारण कहिलेकाहीँ मुटु–कलेजो समेत निकालेर फाल्न तयार हुनुपर्थ्यो नै। विज्ञापन पनि छाप्नुपर्ने, समाचार पनि छाप्नुपर्ने स्थितिमा त्यस्तो हुन्थ्यो। उनी भनिरहन्थे, ‘त्यसरी अंगभंग बनाउनुको साटो भोलि छापेको भए हुन्थ्यो नि।’
दाजु राजेन्द्र बानियाँसँग सपत्नीक शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट उनको निवास कान्तिपुर मार्ग, तीनकुने पुग्दा म अझै भक्कानिएँ। भाउजूको अवचेतन मन बोलिरहेको थियो, ‘म त्यस्तो सोझो मान्छे गुमाएँ। त्यस्तो इमानदार मान्छे गुमाएँ। जसले जिन्दगीभरि परिवार भनेन, साथीभाइ मात्रै भनिरह्यो, आज साथीबाटै धोका भयो।’
उनको अन्तर्मुखी स्वभावबारे आमाले भनेकी थिइन् रे, ‘मैले छोरा त पाएँ, तर उसको आत्मामा के छ ? अहिलेसम्म थाहा पाएकी छैन।’